February 2020 – Page2– Khabar Silo
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएर बालुवाटार पुगेका कोइरालाले मागे ओलीकै राजिनामा !
काठमाडौं , १५ फागुन । नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशमा सभापतिको दावेदार रहेका कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य शेखर कोइराला यतिबेला राजनीतिक भेटघाटमा ब्यस्त छन् । उनले सभापतिका लागि कार्यकर्ता र पार्टीमा लविगं सुरु गरेका छन् । विहिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणमा पुगेका कोइरालाले उल्टै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेका छन् । दुई घण्टा लामो भएको भेटमा उनले ओलीलाई […]
काठमाडाैं, १५ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता भएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा दुई नेताबीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको बताइएको छ । दुई नेताबीच झण्डै डेढ घन्टा कुराकानी भएको थियो । ओली र कोइरालाबीच पहिलेदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध छ। बेलाबेला ओली-कोइराला भेटघाट र ठट्यौली कुरा […]
काठमाडौं। राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान तथा नेपाली क्रिकेटर पारस खड्काले ५१ लाख रुपैया मुल्य पर्ने गाडी चढ्ने भएका छन् । उनलाई यो अवसर महिन्द्रा गाडीको आधिकारिक विक्रेताले जुराइदिएको हो । उनी महिन्द्रको आधिकारिक विक्रोता अग्नि इन्कर्पोरेटको ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त भएसंगै यस्तो अवसर जुरेको हो । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनलाई आज अग्नि इन्कर्पोरेटले एम्बेसडरमा नियुक्त […]
रेखाको फिल्ममा स्मिताको स्वर
काठमाडौं – नायिका रेखा थापाले निर्माण गर्न लागेको फिल्मको एक गीतका लागि प्रचण्डकी नातिनी स्मृति दाहालले गीत गाएकी छिन् । उक्त गीतमा स्मृति र अर्का गायक प्रताप दासको पनि स्वर सुन्न सकिन्छ । गीतलाई बसन्त सापकोटाले तयार पारेका हुन् । रेखा फिल्मसको ब्यानरको फिल्ममा सापकोटाले यसअघि पनि गीत दिएका थिए । रेखाले निर्माण गर्ने फिल्मलाई […]
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुनः आफ्नो कार्यकाल दोहोर्याउनेमा अनिच्छा प्रकट गर्नुभएको छ । जनता टेलिभिजनको कर्पाेरेट टक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै घिसिङले एउटै पदमा बसेर कार्य गरिरहनु त्यति राम्रो नहुने भन्दै यस्तो इच्छा व्यक्त गर्नुभएको हो । सरकार वा सबै क्षेत्रले चाहना गरेमा भने आफूले गरिरहेको कार्यलाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो […]
काठमाण्डाै – पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सबै प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।प्रतिनिधिसभामा समय लिएर बोल्दै डा. भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सम्पूर्ण पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्नुभएको हो । ‘गाउँमा सानो बुकुरो भएकाहरुले कसरी काठमाडौंमा महल बनाए ?’, भट्टराईले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म लगायत हामी सबै […]
नायक पल शाह र नायिका पूजा शर्माले आफ्नो चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’को जोडतोडका साथ प्रचार सुरु गरेका छन् । फागुणको ३० गतेबाट रिलिज हुन लागेको यो चलचित्रलाई लिएर दर्शकमा उत्साह छ । पल र पूजा आज बिहान काठमाण्डौको व्रिलियन्ट कलेजमा पुगेका छन् । कलेजमा सयौ विद्यार्थीहरुको माझ पूजा र पलले चलचित्रको ‘तिम्रो घरको […]
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट ह’टाउने तयारी !
काठमान्डौ , पार्टी नि’र्णय का’र्यान्वयन नगरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प’दबाट ह’टाउने तयारी नेकपा सचिवालयका शीर्ष चार नेताले गरेको खुलेको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले बुधबार सचिवालय बै’ठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा स’दस्यका लागि सि’फारिश गर्न सरकारलाई अ’नुरोध गर्ने नि’र्णय का’र्यान्वयन नगर्ने चे’तावनी दिएका छन्। सचिवालय बै’ठक लगत्तै बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर ‘मलाई घे’राबन्दी […]
काठमाडौं, १४ फागुन । मिडियामा देश छोडेर बेलायत जान लागेको भन्दै आरोप लागेपछि नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले प्रतिकृया दिएकी छन् । उनले देश छाड्ने कल्पना सम्म गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिकृया दिएकी छन् । ‘देश छाड्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो,’ उनले भनिन् ‘मेरा लागि सबैभन्दा प्रीय नै यो देश हो म कसरी छाड्न सक्छु […]